भोइस अफ नेपालमा कसले पाउछ सबै भन्दा धेरै पैसा ? भिडियो हेर्नुहोस् – List Khabar
Home / समाचार / भोइस अफ नेपालमा कसले पाउछ सबै भन्दा धेरै पैसा ? भिडियो हेर्नुहोस्
भोइस अफ नेपालमा कसले पाउछ सबै भन्दा धेरै पैसा ? भिडियो हेर्नुहोस्
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 50 Views
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, यो पनीं पढ्नुहोस,काठमाडौ । नेपालमापनि टिकटक बन्द हुने भएको छ । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ । नेपालमापनि उमेर समूहलाई एकदमै भेरिफाई गर्न नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई टिकटकले भनिसकेको छ । धेरै विकृति आएको भनेर गुनोसो आएपछि साउन १ गतेबाट नेपालमा टिकटक एकाउन्ट बन्द गर्ने प्रस्ताव समेत आएको छ ।
यो वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले बालबालिकाको भनेर आशंका गरिएको भनिएका लाखौँ एकाउन्ट बन्द गरिदिएको थियो । यो संख्या टिकटकका विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताको संख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो।
नियमानुसार १३ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिले मात्र टिकटकमा खाता खोल्न पाउँदछन्। यो भिडियो प्लाटर्फम त्यसैले किशोर किशोरीहरुको बीचमा पनि निकै लोकप्रिय रहँदै आएको छ।
तर उमेर ढाँटेर बालबालिकाको नाममा खोलिएको त्यस्ता झुटपूर्ण खाता एकाउन्टहरु टिकटकले बन्द गरिरहेको छ । टिकटकले पहिलोपटक आफ्नो सामुदायिक निर्देशिका कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका विषयमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नका लागि कम उमेरका प्रयोगकर्ताको विस्तृत विवरण सहयोगी बन्ने टिकटकले जनाएको छ।
यता नेपालमापनि टिकटकले समुदायमा असर पारिरहेको ठहर गर्दै नियमक निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसले नेपाली समाजलाई अहिले नै पचाउन सकिरहेको छैन । यसैले समाज अलिक माथी उठेपछि मात्र फेरी खोल्नेगरी टिकटकसँग नै कुरा गरेर नेपालमा ननभिजेवल बनाउँन आग्रह गर्न प्रस्ताव गरिएको नियमक निकायका एक अधिकारीले बताए ।
Previous भारतमा चट्याङको बेलामा सेल्फी लिँदा एकैपटक ११ जनाको मृत्यु
Next अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले सबै दर्सकलाई दीईन खुसीको खबर
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौ सम्म यौ/न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ?